Duulimaadyada Kazakhstan ilaa Maldives ee Air Astana hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada Kazakhstan ilaa Maldives ee Air Astana hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Kazakhstan Breaking News • Wararka Raaxada • Wararka Maldives • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Dhammaan rakaabka, oo ay ku jiraan kuwa si buuxda loo tallaaley, waxay u baahan yihiin shahaadada diidmada PCR ee Ingiriisiga si ay u galaan Jamhuuriyadda Maldives. Intaa waxaa dheer, rakaabku waxay u baahan yihiin inay dhammaystiraan Baaqa Caafimaadka Socdaalka 24 saacadood kahor bixitaanka.
Air Astana ayaa ku dhawaaqday duulimaadyo toos ah oo ka yimid Almaty, Kazakhstan ilaa Male ee Maldives.
Kazakhstan ilaa Maldives duulimaadyadeeda waxay dib u bilaaban doonaan Oktoobar 9, 2021.
Waddada Air Astana Maldives waxaa lagu adeegi doonaa Airbus A321LR iyo Boeing 767.
Air Astana waxay dib u bilaabi doontaa duulimaadyadii tooska ahaa ee Almaty ilaa Male ee Maldives Oktoobar 9, 2021.
Diyaaradaha Airbus A321LR iyo Boeing 767 ayaa ku shaqayn doona waddada Almaty-Male afar jeer toddobaadkii Talaadada, Khamiista, Sabtida iyo Axadaha.
Hawada Astana duullimaadyo hore u tegi jiray Maldives laga bilaabo Diseembar 5, 2020 illaa Maajo 24, 2021, kahor joojinta sababo la xiriira xannibaadaha dowladda.
Dhammaan rakaabka, oo ay ku jiraan kuwa si buuxda loo tallaaley, waxay u baahan yihiin shahaadada diidmada PCR ee Ingiriisiga si ay u galaan Jamhuuriyadda Maldives.
Intaa waxaa dheer, rakaabku waxay u baahan yihiin inay dhammaystiraan Baaqa Caafimaadka Socdaalka 24 saacadood kahor bixitaanka.
Fiisooyinka waxaa lagu bixin doonaa lacag la’aan marka ay ka soo degaan Madaarka Male.
Markay ku noqdaan Kazakhstan, dhammaan rakaabku waa inay haystaan ​​shahaado PCR diidmo ah, marka laga reebo kuwa si buuxda loo tallaalay.
Air Astana waa side calanka Kazakhstan, oo saldhigeedu yahay Almaty.
Air Astana waxay ku shaqaysaa adeegyo qorshaysan, gudaha iyo kuwa caalamiga ah 64 waddo oo ka timaadda xarunteeda ugu weyn, Madaarka Caalamiga ah ee Almaty, iyo xarunteeda labaad, Nursultan Nazarbayev International Airport.
Madaarka Caalamiga ah ee Almaty, oo hore u ahaan jiray Madaarka Alma-Ata, waa madaar weyn oo caalami ah oo 15 km waqooyi-bari ka xiga Almaty, oo ah magaalada ugu weyn iyo caasimadda ganacsiga ee Kazakhstan.
Gegida Diyaaradaha Caalamiga ah ee Almaty oo ah garoonka ugu mashquulka badan Kazakhstan, ayaa ka dhigan kala bar taraafikada rakaabka dalka iyo 68% gaadiidka xamuulka.